Bariiska Carruurtayda – The Warsan
by warsan April 4, 2020 April 4, 2020 0289
Faadumo Buuni, Hargeysa,
Wednesday March, 2020
Waxan ahay Hooyo haysata toddoba carruura waxay u dhexeeyaan
da’da saddex iyo tobbon jirka iyo saddex jirka. Aabbohood kal saddexaad buu hoyday, halkii loo badnaanna tegay! Godka Eebbe ha u nuuree, wuxuu ahaan jiray Kuuli. Mar wuu heli jiray marna wuu waayi jiray. Keligii kumaan dayn jirin hawsha iyo u soo raadinta bariiska carruurta e’ aniguna waxaan dhinac kale raadin jiray cuntadooda iyo dharkooda waxbarashadu haba danbaysee. Hadda hawshu keli ayey igu tahay. Waxan muddo laba sanno ah iibin jiray muuska, markii se’ deyn badan la igu yeeshay baan faraha ka qaaday. Hadda waxaan haystaa meel lagu iibiyo shaaha waa Aqal-Soomaali yar oo baco badan ka samaysan. Gidaar baan ka dhinac samaystay.
Maqaalku, waxa uu hore ugu soo baxay Hadhwanaag media
Khatarta weedha “Dadka Afsoomaaliga ku hadla” iyo Cunsuriyiinta Faafsha
A History of Coffee: The Yemeni Method
warsan December 29, 2020 December 29, 2020
Turkey’s self-inflicted belt of instability